अब कुरकुरे र चिप्स किन्नेलाई पनि निःशुल्क डेटा ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
अब कुरकुरे र चिप्स किन्नेलाई पनि निःशुल्क डेटा !
भारतमा इन्टरनेट चलाउनको लागि लिइने मोबाइल डेटा यति सस्तो र सुलभ भइसकेको छ कि अब कुरकुरे-चिप्स किन्दा समेत मोबाइल कम्पनीले निःशूल्क डेटा अफर गर्न थालेका छन् ।
मोबाइल प्रयोगकर्ताबीच आफ्नो स्थान कायम राख्न एयरटेलले यस्तो अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले पेप्सीको नामक स्थानीय कम्पनीसँग मिलेर उसका उत्पादन अंकल चिप्स, कुरकुरे र डोरिटोसको प्याकेटमा निःशूल्क डेटा उपहार दिने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
पेप्सीको फुड एण्ड व्रेभेज उत्पादन गर्ने अमेरिकन कम्पनी हो । यसले विभिन्न देशका आफ्ना शाखा खोलेको छ । ग्राहकलाई आकर्षित गर्नको लागि बलिउडका सेलिब्रेटिलाई लिएर यो अफरको टेलिभिजन विज्ञापन बनाउने तयारी रहेको बुझिएको छ । बलिउड अभिनेता अक्षरकुमार र रनविर कपुरलाई केही समयपछि विज्ञापनमा देख्न पाइने भएको समाचारमा बताइएको छ ।
कुरकुरे-चिप्सको प्याकेटमा कोड रहेको कुपन दिइने र उक्त कुपन प्रयोग गरेर एयरटेलका ग्राहकले इन्टरनेट डेटा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ । जसअनुसार १० रुपैयाँको कुरकुरे वा चिप्सको प्याकेट किन्दा निःशूल्क रुपमा एक जीबी डेटा र २० रुपैयाँ माथिको प्याकेटमा दुई जीबी डेटा निःशूल्क रुपमा दिइने कम्पनीको अफर छ ।
चार वर्ष अघि भारतीय बजारमा जियो रिलायन्सको प्रवेशसँगै त्यहाँको मोबाइल तथा डेटामा क्रान्ति नै आएको छ । भारत अहिले विश्वमै धेरै डेटा खपत गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा मात्रै छैन, विश्वकै सबैभन्दा सस्तो मोबाइल डेटा पनि भारतमै छ ।